Hubka Sirta ah ee Ibrahimovic uusan marnaba ka tagin oo la soo ogaaday! – Gool FM
Hubka Sirta ah ee Ibrahimovic uusan marnaba ka tagin oo la soo ogaaday!
(Manchester), 06 Okt 2016 – Iyadoo Isniintii Weeraryahanka kooxda Manchester United, Zlatan Ibrahimovic uu 35 jirsaday ayaa waxaa weli uu ku naalloonayaa caafimaad qab isagoo dhalinaya goolal fara badan.
Haddaba hubka sirta ah ee uusan marnaba ka tegin Ibrahimovic ayaa la soo ogaaday inuu yahay tababarihiisa dhinaca Jirdhiska Dario Fort oo xitaa qayb ka ahaa heshiiskiisii uu ugu soo wareegay Manchester United, sida uu qoray wargeyska ‘Daily Mail’ ee Ingiriiska, waxaana Dario mushaarkiisa bixisa Man United halkii uu ka bixin lahaa Ibra.
Zlatan oo ciyaaray in ka badan 750 kulan ciyaareed ayaa waxaa xilligii uu joogay Milan ay is barteen Dario Fort, oo ah Talyaani ka shaqeynayay qaybta caafimaadka Akademiga kooxda AC Milan iyagoo kaddibna noqday saaxiibo aan kala harin kaddib markii Ibrahimovic uu ku kalsoonaaday.
Fiyoobi qabka jirka Ibrahimovic ee aadka u dhisan ayaa sidoo kale ka dambeeya dhaawac la’aanta laacibkani oo had iyo jeer intii karaankiisa ah ciyaara isla markaana ay yar yihiin dhibaatooyinka soo gaara.
Markii uu Ibrahimovic u wareegay Paris Saint-Germain waxa uu horey u watay oo uusan meel cidlo ah uga tagin tababarihiisa dhinaca jir dhiska Fort, waxaana Ibrahimovic 117 kulan oo uu u ciyaaray PSG u dhaliyay 113 gool.
Inkastoo PSG ay damacsanayd in Dario Fort uu kooxda sii joogo haddana Ibrahimovic ayaa soo kexeeyay oo keenay Old Trafford si uu mar walba ugu ahaado ninka xanaanada siiya jirkiisa ee uu tilmaamihiisa raaco mar walba si uu guulo uga gaaro inta uga hartay waayihiisa ciyaareed.
Ibrahimovic iyo macallinkiisa gaarka ah ee jir dhiska Dario Fort xilligii PSG
Dario oo jirka u jimcinaya Zlatan.
"Diego Costa waa nin waalan.".
GOOGOOSKA: Italy vs Spain 1-1 (Italia & Spain oo isku mari waayay Derby-ga Laatiin Yurub)